Microsoft Edge yeLinux ikozvino yave kuwanikwa muDev vhezheni | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft Edge yeLinux ikozvino yawanikwa muDev vhezheni, mune DEB uye RPM mapakeji
U.S ivo vaive vavimbisa hezvinoi izvi. Kare tinogona kuyedza Microsoft Edge paLinux. Asi ivo vakaputsa vimbiso yavo, kunyangwe hazvo paine chikonzero chakanaka: haisi kungowanikwa chete kunaDebian / Ubuntu, asi ivo vakaburitsawo RPM package yeRed Hat, Fedora, uye chero kugovera kunoshandisa iyo mhando yepakeji futi. Ndingadai ndisiri kuita zvakanaka dai ndisina kutaura kuti ndawana kuonga kune OMG! Ubuntu!, Asi ini ndatsvaga ndega uye ndichaenda kunopa zvinongedzo kuti munhu wese anoda kuzviedza.
La vhezheni inowanikwa ndeye DevNdokunge, haisi iyo beta iyo yavakafambira mberi kwatiri, asi yekutanga vhezheni. Iyo Microsoft Edge kuverenga yeLinux ndeye 88.0.673.0-1 uye, zvirinani kana tikachiisa muUbuntu, ichawedzera iyo browser repository. Tichitarisa pa "Software neZvidzoreso", chinoonekwa chinonzi "kugadzikana", saka zvingangoita kuti iyo PPA inowedzera isu ichatipawo iyo yakagadzikana vhezheni kana nguva yacho yasvika.
Microsoft Edge yeDebian, Ubuntu, Fedora, Red Hat… kune wese munhu!
ari dhawunirodha zvinongedzo yeMicrosoft Edge yeLinux unogona kuiwana mu iyi Reddit post, uko kwatakabatanidzwa Microsoft server yeDhi vhezheni uye ivo vanotipa isu kune zvinongedzo zveiyo DEB vhezheni (pano) uye RPM (pano). Kana zviri izvo zvatichawana kana tikazviisa, ingangoita yekutanga vhezheni ine zvimwe zvisingakwanisike kana zvirambidzo, asi izvo zvinotibvumidza isu kuwana zano reizvo isu tichazokwanisa kushandisa mumwedzi mishoma. Dhizaini yacho inenge yakatodzana neiya yeWindows vhezheni, zvinoreva kuti haina kuremekedza dingindira rekuparadzirwa kwedu kweLinux.
Naizvozvo, vashandisi vaive vakamirira semvura muna Chivabvu kuvhurwa kweMicrosoft Edge yeLinux, unogona kutonakidzwa nazvo. Ini handisi mumwe wavo, saka pane zvishoma zvandinogona kutaura nezvazvo kuti zvinoshanda sei. Vaya venyu vanozviedza, musazeze kusiya zvamakasangana nazvo mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft Edge yeLinux ikozvino yawanikwa muDev vhezheni, mune DEB uye RPM mapakeji
Luis Bedoya akadaro
Chokwadi ndechekuti bhurawuza iri rinongova nekuita kunoshamisa muWindows (haigone kurambwa), nekuti muMacOS Chrome ichiri nani, uye ndinozvitaura kubva mukushandiswa kwemazuva ese, sezvo ini ndichishandisa kusangana kweEdge nemaakaundi eMicrosoft. Zvino, iwe unofanirwa kuona kuti zvinoenderera sei paLinux, asi sezviri pachena paMacOS, handifunge kuti chiito chikuru
Pindura Luis Bedoya
Nekusavimbika kukuru kwemabhurawuza uye mazhinji acho akavakirwa paChromium, ini handisi kunyanya kufarira kuyedza iyi bhurawuza, ndoda kuzvisiya seye default browser.
Nenhamba yakakura yemabhurawuza uye mazhinji acho akavakirwa paChromium, ini handidi kunyanya kufarira kushandisa iyi browser kunyangwe zvakadaro nemukurumbira wainayo. Asi nekuda kwekunakirwa uye mavara.
Ndiri kutove ndichiishandisa seyakanyanya browser. Ini ndinongogona kutaura kuti inoshamisa, inoenda nekukurumidza, inonwisa mvura, ine hutsinye, zvese zvinoshanda sekutarisira, handina kuwana matambudziko uye akatsiga, ndinoshamisika kuti ndiyo chiteshi cheDev. mirira kuti isvike nemabasa asara!
Vamwe vatinoshanda navo vanotaura zvakafanana kwandiri, zviri kufamba mushe uye zvakanyanya kune avo vedu vanoshanda neMicrosoft services.
Pindura kuna LordTech
Vamwe vatinoshanda navo vanotaura zvakafanana kwandiri, zviri kufamba zvakanyanya, zvakanyanya uye zvakanyanya kune avo vedu vanoshanda neMicrosoft services.
Pindura kuna Ishe
Iyo yekuyedza vhezheni iri nzira refu yekusvika kune mamwe ma distros.
Canada inotungamira mukubiridzira, asi hapana anoziva nei.